RESIDENT EVIL: Infinite Darkness (2021) Resident Evil : Infinite Darknessနက်ဖလစ်ရဲ့ ရက်ဆီးဒန့်အီဗယ် စီးရီးအသစ်လာပါပြီ။ RE စီးရီးတွေဟာ ရုပ်ရှင်တွေထက် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေ့ရှိပြီး ရုပ်ထွက်လည်း လှပတာ အားလုံးအသိပါ။ဒီစီးရီးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။အရင်ရုပ်ရှင်တုန်းက ရက်ကွန်းမြို့က ဇွန်ဘီးတွေကြားထဲက သမ္မတရဲ့သမီးကို ကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ လီရွန်ပဲ ပြန်ပါလာပါတယ်။ဒီတစ်ခါကတော့ သမ္မတအိမ်တော်ထဲမှာ ဇွန်ဘီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရဲ့ တရုတ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့လျို့ဝှက်ဖိုင်တွေ အခိုးခံရမှုကို စုံစမ်းဖို့ တာဝန်ပေးခံရတာပါ။အဲဒီကတဆင့် ဇွန်ဘီးဖြစ်စေတဲ့ တီ-ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဟာ ထင်တာထက် ပိုကျယ်ပြန်ရှုပ်ထွေးနေတာကို သိရတဲ့အခါ...အညွှန်း နဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Mr.Anderson ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ File size… 500 MB Quality….WEB-DL 1080p mp4 Duration…. 30 min Episodes .....4Episodes Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Mr.Anderson Encoder ..... August Episode 01 - Yoteshin | Megaup | Userdrive | Veryfiles | ...
The Naked Director (2019) The Naked Director (2019)Pornမကြည့်ဖူးတဲ့လူဆိုတာ ဒီဖက်ခေတ်မှာမရှိသလောက်ပါပဲအထူးအဖြင့် Japan Pornတွေကိုပေါ့ဒါပေမယ့် Japan Pornကြည့်တဲ့သူတိုင်း စိတ်ညစ်ရတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ ဆင်ဆာတွေပါနေတာပါပဲဒီဆင်ဆာတွေက J Pornတွေရဲ့ အနှစ်သာရကို ဖျက်စီးနေတယ်လို့မကြာခဏဆိုသလိုတွေးမိကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီ The Naked Director ဆိုတဲ့ စီးရီးထဲကဇာတ်ဆောင်မင်းသား မူရာနိရှိကလဲဒါကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်မူရာနိရှိ က ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုဘူးလူ့သဘာဝကို အပြသနိုင်ဆုံး Videoတွေကလဲ Porn videoတွေသာဖြစ်တယ် လို့ခံယူထားပါဒါပေမယ့် Japan နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ ဆင်ဆာမပါတဲ့ Pornတွေဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်ဒီတော့ အဲဒီခေတ်အခါက Porn ထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာတွေကPornတွေထဲ တကယ် ဆက်ဆံချင်းမရှိပဲဒီဘက်ခေတ် အိပ်ရာဝင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလို မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ရဲ့အဓိကနေရာတွေကို တိပ်တွေကပ်ပြီး ရိုက်ကြပါတယ်ရလာတဲ့ Videoကိုမှ ဆင်ဆာထပ်ထည့်ပြီး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီကြပါတယ်ဒါကို မူရာနိရှိက သဘောမကျပါဘူးခံစားချက်မပေါ်လွင်ဘူးလို့ ယူဆပြီး သူ့ဇာတ်ကားတွေမှာဂျပန်ဆင်ဆာဥပဒေတွေကို အထိခံပြီးရိုက်ပါတယ်ဒီလိုခေါင်းမာတဲ့ မူရာနိရှိရယ် သူ့ကိုဖမ်းချင်နေတဲ့ရဲတွေနဲ့လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဖက်တွေရဲ့ ကောက်ကျစ်မှုတွေဆင်ဆာဥပဒေကို မူရာနိရှိတစ်ယောက် ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်ရင်းဒီဘက်ခေတ်J pornတွေအဆင့်ထိရောက်လာအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ...
MINE (2021) Mine (2021)ငါစွဲကြီးသူများ .....ငါပိုင်တဲ့ဟာ ငါ့အရာ ဆိုတာမျိုးက လူ့အပေါ်ယံလွှာ ရေပေါ်ဆီတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အတ္တတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အထက်တန်းလွှာတွေကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ဟဲဗီးဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။လောင်ရမှာ ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် ငရဲမီးကို ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်းသလို ခံစားရဦးမယ့် ဇာတ်လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Lee Bo Young နဲ့ Kim Seo Hyung အပြိုင်အဆိုင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတွဲအစပ်ကတော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကားပါပဲ။ဆောဟီဆူး( Lee Bo Young)က နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ချယ်ဘိုမိသားစုရဲ့ ဒုတိယမြောက်သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက် သူအလုပ်အကိုင်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် ချယ်ဘိုမိသားစု ဟျိုဝန်းကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ အရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ် (ဇာတ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ပါသုတ်ရမယ်နော် ချမ်းသာချက်က)မိသားစုရဲ့ ဒုတိယချွေးမအနေနဲ့ကော ကလေးရဲ့မိထွေးအနေနဲ့ပါ အဲ့မိသားစုထဲဝင်ဆန့်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး နေထိုင်းရင်းနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူကိုယ်သူပျောက်ဆုံးသလိုခံစားနေရတဲ့ ဆိုဟီဆိုဂျောင်ဆူဟွန်း (Kim Seo Hyung) ကတော့ ပထမသားနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ ချွေးမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ထက်မြတ်တယ် အလုပ်လုပ်ရင်းလည်းတိကျတယ်မတူညီတဲ့မိသားစုနှစ်စုလာတဲ့ ချွေးမနှစ်ယောက် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ ပုံစံအစစ်အမှန်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲ????ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ...
Sex/Life (2021) Sex/Life (2021)============IMDb Rating - 6.5/10Comedy, Drama, Romanceဇာတ်ကားနာမည် မြင်တာနဲ့ ပြေးဒေါင်းတော့မယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် အညွှန်းလေးတော့ ဖတ်သွားဦးဗျ :3ပထမဆုံး မှာချင်တာက ဒီကားဟာ မိသားစုနဲ့ အတူမကြည့်သင့်တဲ့ကားဖြစ်သလို တစ်ယောက်တည်းကြည့်ရင်လည်းနားကြပ်နဲ့ကြည့်ပါ :3 . B.B.Easton ရဲ့ 44 Chapters about Men ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ Sex/Life ဟာတော့စားစော်ကြီးတစ်ယောက် အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘီလီ ကော်နယ်လီဆိုတဲ့ မိန်းမဟာ တော်တော့ကို ထန်တဲ့သူပါ။ဘယ်လောက်ထန်သလဲဆို ကလေးနို့တိုက်ရင်းတောင် စိတ်က ကယောင်ချောက်ချားတွေ မှန်းဖီးလ်ပါတယ် :3 ။ ဟုတ်ပါတယ်သူက လင်ရှိအမျိုးသမီး ကလေးနှစ်ယောက် အမေပါ။ လင်ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ဒီလောက်ဖြစ်နေလဲမေးရင်တော့သူ့လင် ကူပါက ကလေး ၂ ယောက်မွေးပြီး သူ့တာ၀န်ကျေပြီ ထင်နေတဲ့ကောင်စားလို့ ပြောရမှာပေါ့ ဒီတော့ ဘီလီတစ်ယောက်သူ့ရဲ့ အတိတ်တုန်းက သူဌေး ...
Elite စက္ကူမြို့တော်ကြီး ပြီးတဲ့နောက် သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စပိန် series လေးတစ်ခု ထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ် နာမည်လေးကတော့ Elite အထက်တန်းလွှာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ Las Encinas ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးဟာ စပိန်နိုင်ငံပြဲပြဲစင်မှာ ကြေးရတက်လူတန်းစား တွေ လူကုန်ထံသားသမီးတွေပဲ တက်နိုင်တဲ့ အထက်တန်းစားကျောင်းတော်ကြီးပေါ့ ဒါပေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ သာမန်လူတန်းစားအသိုင်းဝိုင်းက လူငယ်လေးသုံးယောက် Las Encinas ကျောင်းတော်ကြီးမှာတက်ရောက်ဖို့ ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါတယ် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ငလျင်လှုတ်ခတ်မှုကြောင့် ထိုလူငယ်လေးသုံးယောက်တက်နေတဲ့ အညတရကျောင်းလေးပြိုကျမှုဖြစ်ပြီးနောက်မှာမြို့နယ်ကောင်စီက ခရစ်ရှန် ဆမ်မြူရယ်နဲ့ နာဒီယာတို့သုံးယောက်ကို Las Encinas ကျောင်းတော်ကြီးမှာ အခမဲ့ပညာသင်ယူဖို့ စကော်လာပေးလာပါတယ် သူတို့သုံးယောက်ကျောင်းစရောက်ပြီးနောက်မှာ အညတရနဲ့ လူကုန်ထံတွေကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာပါတယ် ထို ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရင်းကြားထဲကပဲ ကျောင်းမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် သေဆုံးမှုနောက်ကွယ်ကတရားခံကဘယ်သူလဲ ဘယ်သူကောင်မလေးကို သတ်သွားတာလဲ အညတရကျောင်းသားလေးသုံးယောက်ကပဲမကျေနပ်လို့သတ်တာလား ဒါကတော့ အပြီးထိကြည့်မှပဲ သိရမှာပါ အရင် Money Heist ထဲက ဒန်ဗာတို့ အယ်လီဆန်ပါကာတို့ကိုမြင်တွေ့ရဦးမှာဖြစ်ပြီး တချိန်ကဓားပြကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရီယိုကိုလဲ ခရစ်ရှန်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားလေးအနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံကလဲ ပြောစရာမရှိလောက်အောင် သေသပ်တဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းကစားသွားတာလေးတွေလဲ လှပါတယ် ဒါကတော့ကျွန်တော့်အမြင်ပါ Money Heist လိုပဲနောက်ခံ သီချင်းအလန်းလေးတွေတွေ့ရမယ့်အပြင် ဘယ်အချိန်ဘာဖြစ်မှန်းမသိရပဲ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းအောင်ရိုက်ထားတာတွေ့ရမှာပါ တစ်ပိုင်းပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ကြည့်ချင်ကြမယ် ဆိုတာရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ် rating အနေနဲ့ကလဲ IMDb မှာ 7.7 ရထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ100% တောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ဇာတ်အိမ်ဘယ်လောက်ထိခိုင်ခံ့မှုရှိလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါ ဒီဇတ်လမ်းတွဲကို မိသားစု နှင့် အတူကြည့်ရှုရန် ...
What Happens to My Family? What Happens to My Family ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း*********************************************အပိုင်း( ၁ မှ ၅၃)ထိ စ/ဆုံးဒီစီးရီးဟာ Family kdramအများအစားဖြစ်ပါတယ်....familyအမျိုးအစားချင်းတူပေမဲ့ တစ်ချို့တွေက Penthouse ,Sky Castleတို့လို အိပ်မက်ထဲထိလိုက် လောင်မြိုက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးသဘောကျကြသလို နွေးထွေးအေးမြပြီး ချစ်စဖွယ်ရင်ခုန်ကြည်နူးစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့My Father is Strange , Reply 1988 တို့ လို စီးရီးမျိုးကိုနှစ်ခြိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်....ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့စီးရီးက My Father is Strangeတို့လိုပုံစံမျိုးပါပဲ....မလောက်မြိုက်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ...အပိုင်း ၅၃ ပိုင်းရှိပြီး မြန်မာစာတန်းထိုးလည်း ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပါ....ပျိုမေတို့အတွက်အဆင်ငမ်းဖို့ Park Hyung Shik နဲ့ Yoon Park တို့ လို မင်းသားချောတွေပါဝင်ထားသလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး Nam Ji Hyun လည်း ပါဝင်ထားပါတယ်.....ဒီကားက တော်တော်လည်းရယ်ရသလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်..မိသားစုတွေဒီအချိန်မှာ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ရာအသင့်တော်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲလို့တောင် ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်....တစ်ပိုင်းလောက်မြည်းစမ်းကြည့်လိုက် လုံးဝ စွဲသွားစေရမယ်လို့အာမခံပါတယ်.....Country: South KoreaEpisodes: 53Director: Jun Chang ...
So Not Worth It(2021) So Not Worth It(2021) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း***************************************အပိုင်းသစ်(၁ မှ ၁၂)ထိ စ/ဆုံး(၁၂ ပိုင်းဆက်တိုက်ထွက်ရှိထားတာမို့ တစ်ခါထဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...အပိုင်းသစ်တွေ Updateပြီးတာနဲ့လုပ်ပေးပါ့မယ်...)ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားအလန်းလေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုမှာ အားလုံးစုဝေးနေထိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံတကာက အဆောင်နေကျောင်းသားတွေဘဝကို အရောင်စုံ ဒီဇိုင်းစုံ ကာလာစုံနဲ့ တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတူနေထိုင်ကြရမယ့် ကျောင်းဆောင်မှာ နိုင်ငံမတူ လူမျိုးမတူတဲ့လူငယ်တွေ စုဝေးပြီး လူငယ်ဘဝကိုအတူဖြတ်သန်းရချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေအသစ် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွေနဲ့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရပြီးဘယ်လိုအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေပေါက်ဖွားလာမလဲဆိုတာကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွီချင် ရင်ခုန်ချင် ကြည်နူးချင်သူများ ကြည့်သင့်ပါကြောင်း......Episodes: 12Genres: Friendship, Comedy, Romance, Youth, SitcomTranslator –Hnin Pale,Lwin Lwin Aung,Ei Phyu Khin & Khine Khine WaiEncoder – Phyo Pyae Episode 1 -300MB UsersDrive /Yoteshidrive/ MegaUp/MegaNZ / Veryfiles / VIP Episode2-300MB UsersDrive /Yoteshidrive/ MegaUp/MegaNZ / Veryfiles / VIP Episode3-300MB UsersDrive /Yoteshidrive/ MegaUp/MegaNZ ...
Hospital Playlist Season 1 (2020) Hospital Playlist (2020)==================Korea Drama List မှာ Rating 10/10 ထိရရှိထားပါတယ်။#Unicodeဒီတစ်ခါ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ March 12 ရက်နေ့ကမှ Netflix မှာစတင်ပြသခဲ့တဲ့ Series အသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း(၁၂)ပိုင်းရှိပြီး အပတ်စဥ် ကြဿပတေးနေ့တိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး သောကြာညတိုင်း cm ကနေတင်ပေးသွားပါမယ်။ဒီ TV Series လေးကအရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကားတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဆရာဝန်ကားလေးပါပဲ။ တကယ့်ဘဝတွေနဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။ဆေးကျောင်းအတူတူ တက်ခဲ့ကြတဲ့ ဆရာဝန် သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။တစ်ယောက်က ပျော်တတ်တယ်။တစ်ယောက်က အူကြောင်ကြောင်။တစ်ယောက်က စာအုပ်ကြီးသမား။တစ်ယောက်ကတော့ ခံစားလွယ်တယ်။တစ်ယောက်ကတော့ လိုရင်းတိုရှင်းသမား။ အပြင်မှာလည်း ဒီလိုဆရာဝန်မျိုးတွေ အစုံပါပဲ။ ထွေလာမှာ ပါတဲ့ ဒိုင်ယာလော့တစ်ခုကို သဘောကျစရာပါ။ဆရာဝန်တွေ‌ ပြောနေကျစကားတွေကို သိလား????? "မသေချာပါဘူးခင်ဗျာ" တို့ . "မသိသေးပါဘူး" တို့ဆိုတာလေ . ဒါမှမဟုတ် "စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်" ဆိုတာမျိုးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ပြောတဲ့စကားကို သူတို့ ...
Lupin Season 1 +2(2021) ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ဆိုတာနဲ့ ရိုမန့်စ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အချစ်မြို့တော်ကြီးလို့ပဲ တော်တော်များများက ပြေးမြင်မိကြမှာပါ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ ပဲရစ်မြို့က ဇာတ်လိုက်​ကျော်ခိုးသားကြီး အာဆန်းဂျုပ်ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ခိုးကွက်တွေကို ကြည့်ရှုကြရမှာပါ ခိုးသားဆိုလို့ သာမန်သူခိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး ပဲရစ်မြို့ရဲ့ အထင်ကရပြတိုက်ကြီး လူဗာပြတိုက်က သမိုင်းဝင်ယူရိုသန်းချီလည်ဆွဲကြီးကိုမှ ပါးပါးနပ်နပ်ခိုးယူမယ့် သူခိုးကြီးပါ သူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ခိုးသားလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက "အာဆင်နီလူပင်" ပါပဲ အာဆင်နီလူပင်ရဲ့ အကွက်တွေကိုအသုံးချပြီး ဟိတ်ဟန်အပြည့်နဲ့ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ပါးပါးနပ်နပ်ကစားသွားပုံတွေကတော့ သြချလောက်စရာပါ ဒါပေမယ့်သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ငွေလိုချင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး ဒီသမိုင်းဝင်လည်ဆွဲကြီးကိုမှ ဘာလို့ခိုးယူရလဲဆိုတာတွေကိုတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အာဆန်းရဲ့ငယ်စဥ်ကလေးဘဝပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ပြသွားတာဖြစ်ပြီး အပိုင်း၅ပိုင်းပဲ ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငြီးငွေ့မသွားစေဘဲ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မှာပါ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦးTranslators - Yoon Sandi Aung, MTA Season 1 (1-5) Zip - VIP / Yoteshin / Megaup / Veryfiles Season2(1-5) Zip - VIP / Yoteshin / Megaup / Veryfiles Season2Episode 1- ...
TMDb: 8.1/10 181 votes
Lupin Season 1 +2(2021)
Behind Her Eyes (2021) Behind her eyes (2021)သူ့မျက်ဝန်းနောက်ကွယ် .....အကြည့်တွေကို အပြုံးနဲ့ဖုံးတယ်။အပြုံးနဲ့ မဖုံးဘဲ ထားတဲ့ တစ်နေရာ ရှိတယ်။နှလုံးသား ..... တဲ့။နှလုံးသားထဲ စိတ်ထဲက အရာကို လူတိုင်း ကွယ်ဝှက်ထားတတ်ကြပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကို သွင်ပြင် ကြည့်ရုံနဲ့ ခန့်မှန်းမရတာ ခံစားချက်တို့၊ စိတ် တို့ပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာရော .....ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။လူဝိစ် ဆိုတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမိခင်ဟာ တစ်ခုလပ် သားသည်မိခင် ဖြစ်ပါတယ်။မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုလူချောလေး ဒေးဗစ် နဲ့ ဆုံဖို့ရာ ကံကြမ္မာက ဖန်လာပြန်ပါတော့တယ်။ကံဆိုးစွာနဲ့ တစ်ခုလပ်မလေးရဲ့ကံကြမ္မာဟာ ကံဆိုးမသွားရာကို မိုးက လိုက်လို့ရွာနေတာပါပဲ။ဒေးဗစ်ဟာ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့အမျိုးသမီးကတော့ အဒဲလ် ပါ။တစ်နေ့မှာ အဒဲလ် နဲ့ လူဝိစ် တို့ တွေ့ဖို့ အကြောင်းဖန်လာချိန်မှာတော့ ......Psychosexual Thriller အမျိုးအစား ဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်နေကျ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ထဲက ကွဲထွက်နေပါလိမ့်မယ်။Netflix စီးရီးတွေကတော့ စိတ်ချရလောက်အောင် ကောင်းမွန်ဆဲပါပဲ။IMDb ...
Move to Heaven (2021) Move to Heaven (2021)ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း .....ဂူရူကတော့ အက်စပါဂျာ ရောဂါ (Asperger Syndrome) လို့ ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းတဲ့ ရောဂါသည်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဂူရူရဲ့ အဖေ ဟန်ဂျောင်အူ ကတော့ Move to Heaven ဆိုတဲ့ သေဆုံးသူတစ်ယောက်ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာ ဂူရူ ရဲ့အဖေ သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် ဂူရူတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့် ဂူရူရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူ ဆန်းဂူ တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန်းဂူ က သွေးအေးတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပွဲတစ်ခုကြောင့် ဆန်းဂူက ထောင်ကျပြီး ထောင်က ထွက်လာခဲ့တာပါ။ဆန်းဂူက ဂူရူရဲ့စောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်လာပြီး သူတို့နှစ်ယောက် အတူတူ Move to Heaven လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ .....Translators - August, Shwe ...
Sweet Tooth (2021) Sweet Tooth (2021)IMDb 8.4/ 10Netflix ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်၀င်စားစရာ series တစ်ခု မိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီJeff Lemire ရဲ့ Sweet Tooth ဆိုတဲ့ DC Comic Book ကို ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ Action-adventure, fantasy drama လေးမို့ DC fan တွေ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်Sweet Tooth ဆိုတာကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် ကောင်လေးလေးရဲ့ နာမည်ပါဒီကောင်လေးဟာ hybrid လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ပိုင်း သမင်တစ်ပိုင်းလေးပါကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းသွားပြီးနောက် သူဟာ တခြားသော hybrids တွေနဲ့ရောပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်အရွယ်ကလည်းငယ် အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ hybrid လေးတစ်ကောင် ဒီလောကကြီးမှာ အသက်ဆက်နိုင်ဖို့ရာ တစ်ဦးတည်း ရင်ဆိုင်ရပုံတွေကို စိတ်၀င်စားဖွယ်တင်ဆက်ထားပုံတွေကိုအပိုင်း ၈ ပိုင်းနဲ့ တစ်၀ကြီး ကြည့်ရှူရမှာဖြစ်ပါတယ်DC entertainment ...